पेट दुखेर सहनै नसकेपछि अस्पताल पुगिन्, पेटमा यस्तो जीव भेटियोकी सबै अक्क न बक्क भए ![भिडियो] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/पेट दुखेर सहनै नसकेपछि अस्पताल पुगिन्, पेटमा यस्तो जीव भेटियोकी सबै अक्क न बक्क भए ![भिडियो]
एजेन्सी – एक रूसी युवती घरको बगैंचामा सुतिरहेकी थिइन्। बिहान उठ्दा उनको पेट धेरै नै दुखिरहेको थियो। केहि घण्टा पेट दुख्न कम होला भनेर घरमै बसिन्। तर, उनको पेट दुख्न कम नै भएन। त्यसपछि उनी तुरुन्तै अस्पताल पुगिन् र भर्ना भइन्।
अस्पतालमा डाक्टरहरुले शुरुमा दुखाई कम गर्न उनलाई सामान्य एनेस्थेटिक दिए। त्यसपश्चात डाक्टरहरु थप चेक-जाँचमा जुटे। मेडिकल जाँचको क्रममा ती युवतीको पेट भित्र जे देखियो, त्यसले डाक्टरहरु चकित मात्र परेनन् उनीहरुको होश नै उड्यो। खासमा, ती युवतीको पेटमा सर्प थियो।
पेटमा सर्प रहेको थाहा भएपछि डाक्टरहरु थप समस्यामा परे। सर्प पेटबाट कसरी निकाल्ने भन्ने विषयले उनीहरुलाई दिन सम्म तनाव दियो। डाक्टरहरुले तुरुन्तै एक ट्युब महिलाको मुखबाट छिराएर सर्पलाई त्यहींबाट निकाले। बताइएअनुसार, उक्त सर्प लगभग ४ फिटको थियो।
डाक्टरहरुले युवतीको पेटबाट सर्प निकालेको भिडियो पनि मिडियाहरुमा आएका छन्। सार्वजनिक भिडियोमा डाक्टरहरुले पेट भित्रबाट सर्प निकालेको देखिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले बताएअनुसार घटना रुस डगेस्तन स्थित लेभाशीको हो। युवतीको पेटबाट निकालिएको सर्प जिउँदो थियो कि थिएन भन्ने बारे पनि प्रष्ट पारिएको छैन।
स्थानीयहरूका अनुसार त्यसप्रकारका घटनाहरु त्यस क्षेत्रमा सामान्य हुन्। यस अगाडी पनि त्यसप्रकारका घटना भइसकेको उनीहरुको बताउँछन्। घर बाहिर सुत्दा सर्प मुखबाट छिर्न सक्ने भन्दै त्यहाँमा बुढा-पाकाहरु त्यसो नगर्न सुझाव दिन्छन्।